Sivivinye izimpumputhe ezihlakaniphile nezizenzakalelayo ze-KADRILJ ezivela ku-IKEA. | Izindaba zamagajethi
Imikhiqizo "ehlakaniphile" ziya ngokuya zikhona osukwini lwethu usuku nosuku nasemakhaya ethu, labo abaphakamisa ukufaka izimpahla ezindlini zabo manje, bathole IKEA umlingani omuhle uma kukhulunywa ngokufaka imikhiqizo exhunywe njengama-light bulbs, izipikha futhi manje nayo iyabopha. Yebo, siyazi ukuthi izimpumputhe ezizenzakalelayo bezilokhu zikhona emakethe isikhathi eside kodwa… ngabe kukhona umuntu okwenze kwalula njenge-IKEA?
Hlala nathi futhi uthole ukuthi imodeli ye-KADRILJ evela ku-IKEA iqukethe nokuthi kungani ibekwe njengezimpumputhe ezinhle kakhulu ezimakethe. Impumputhe esingayilawula ngeKhaya leGoogle kanye nesilawuli sayo esikude.
Siyazi ukuthi iqiniso lokuthi ngikutshela lapha noma ukuthi ulibona ngqo alifani, yingakho silayishe ividiyo yokufaka ngqo ku-YouTube Futhi sikutshela nokuthi singayilawula kanjani nokuthi yiziphi izici zayo ezithakazelisa kakhulu, ngakho-ke ungaphuthelwa yiyo, ngoba uma uyithengile noma uhlela ukuyithenga, lokhu kuzokwenza kube lula kakhulu kuwe.
1 Idizayini: I-minimalist kakhulu, i-IKEA kakhulu
2 Inqubo yokufaka
3 Isebenza kanjani impumputhe yeKADRILJ
4 Okuhlangenwe nakho komsebenzisi nombono womhleli
Idizayini: I-minimalist kakhulu, i-IKEA kakhulu
Ngokushesha, le KADRILJ ivusa abanye ebangeni le-IKEA lezimpumputhe, indwangu eguquguqukayo empunga nepulasitiki ne-aluminium kuqeda ngemibala yemvelo. Eqinisweni, icishe ifane nakwabanye asevele bekhona, hhayi ngokufakwa kuphela, kepha nangosayizi nomumo. Mayelana nento kuphela ehlukile iqiniso lokuthi, ngenxa yezizathu ezisobala, phezulu kuncane kakhulu. Inesembozo ekhoneni eliphezulu kwesobunxele esizosivumela ukuthi sifake futhi sisuse ibhethri lapho kufanele silishaje khona. Kungimangazile ukuthi abasinikanga ikhono lokushaja ibhethri ngaphandle kokuthi silishaje.
Esinakho eceleni kwalesi sikhwama izinkinobho ezimbili ezincane ezingabonakali, futhi ezizosikhipha ezinkingeni ezingaphezu kweyodwa, futhi lokho ukuthi zisivumela ukuthi siphakamise futhi sehlise izimpumputhe ngaphandle kwesidingo seremote, ucabanga ukuthi ukulahlekelwa? Yebo, ngenkathi ucela entsha, ukuze ukwazi ukuyilayisha futhi uyilande ngaphandle kokusebenzisa uhlelo lokusebenza. Indwangu yenziwe nge-polyester engu-83% no-17% wenayiloni, ngenkathi ezinye izakhi zenziwe ngepulasitiki ne-aluminium, idizayini iyi-minimalist, ejwayelekile kakhulu ye-IKEA.
Izintaba ze-IKEA uyazithanda, noma uyazizonda. Ngingomunye walabo bantu abangajwayelekile abakujabulelayo ukwenza lolu hlobo lwento. Ukuyifaka, uzodinga kuphela amaphuzu amabili okusimisa kanye nezingwegwe okubandakanya. Ziyizingwegwe ezisusekayo ezinesistimu yezinkinobho, okulula ukuzibeka njengokuzisusa. Lapho sesithathe izilinganiso ezihambisanayo, kuzofanele simise kuphela izingwegwe ngezikulufo ezine (ezimbili ngehhuku ngalinye). Vele, khumbula ukuthi izikulufo azifakiwe kwiphakeji, ngasizathu simbe engingasazi. Y Yize impumputhe ingasindi kakhulu, akukaze kube buhlungu ukusebenzisa izikrini ezifanele ubukhulu obukhulu.
Beka izingwegwe Kumele sicindezele kuphela inkinobho eguquguqukayo evumela ukuthi ingene futhi ekhishwa kuphela lapho nje sibeka izimpumputhe. Sinakho konke okulungele ngokuphelele. Ukuphela kokufanele sikwenze ukuvula isivalo bese ufaka ibhethri, okuvame ukuba nokushaja okuthile. Ngesembozo ngaphakathi sizothatha idivaysi yokuxhuma siyixhume, kuyilapho i-RF emitter ixhunywe nge-USB kulesi sixhumi sokuqala. Ine-USB insikazi engasetshenziselwa ukushaja ibhethri lomkhiqizo, noma iyiphi enye idivayisi, leli phuzu livuna i-adaptha yenethiwekhi.
Isebenza kanjani impumputhe yeKADRILJ
Sinezindlela ezintathu zokulawula izimpumputhe ze-KADRILJ ezivela ku-IKEA ngokushesha futhi kalula:
Ngaphesheya kwebhuloho le-TRADFRI ngezinhlelo zokusebenza ezihambelanayo, i-Google Home
Through the Isilawuli kude kufakwe kuphakheji
Ngokusebenzisa izinkinobho ezimbili ezibekwe eceleni kwesivalo ibhethri engaboni
Sengivele ngikuxwayisa, indlela ejwayelekile lapho uzosebenzisa khona izimpumputhe, ngale kwe-automation eyenziwe yi-IKEA Smart Home, yi-remote control. Lokhu kunokusekelwa kukazibuthe ukuthi singanamathisela odongeni ngesihlanganisi sakho se-3M noma ngezikulufo ezimbili. Singathatha futhi le rimothi futhi siyise noma ikuphi lapho sifuna khona. Mncane, wakhiwe kahle futhi usebenza kude, Akudingeki ukuthi isondele ngokweqile kwabangaboni, ngiyithandile uqobo lwami.
Okuhlangenwe nakho komsebenzisi nombono womhleli
Sibhekene nesinyathelo esilandelayo ku-automation ne-automation yasekhaya. Ngihlala ngincoma ukuqala ngama-light kuqala, lapho i-Philips enebanga layo le-Hue ne-IKEA nebanga layo le-TRADFRI ibekwe ngokucacile njengabaholi. Kepha uma ufuna okuthile okwengeziwe, kufanele uguqule amakhethini namakhethini. Inzuzo yokuqala ukuthi kulula kanjani ukuyithola, kunoma iyiphi i-IKEA onayo. Siya ekufakweni, futhi kubonakala sengathi i-IKEA ibeke umzamo omkhulu kulokhu, ngaphansi kwemizuzu engu-15 singasebenza ngokuhlakanipha kwethu okuyimpumputhe, futhi lokhu kuyaziswa.
Idizayini encane nokufakwa okulula
Inerimothi yayo futhi ayisindi
Akuzuzi ubukhulu noma usayizi uma kuqhathaniswa nezinga
Okwamanje kuhambisana kuphela ne-Google Home
Akubandakanyi izikulufo noma ama-plugs wokufaka
Kungaba opaque ngaphezulu (kunenye imodeli okuyiyo)
Isinyathelo esilandelayo ukuthi ube nebhuloho lokuxhuma le-TRADFRI bese uqhubeka ukulifaka ngokushesha. Uma usuvele unayo, Ngiyakuqinisekisa, ngeke wazi ukuthi ungaphila kanjani ngaphandle kwayo. Isilawuli kude sisebenza kahle ngokumangazayo futhi siba umlingani ofanele kakhulu lapho singafuni "ukulahla" i-Google Home. Sizokwazi ukuyithenga le KADRILJ kwa-IKEA ngamanani azoba phakathi kwama-euro angama-99 nama-euro ayi-129 cishe. kuya ngosayizi esikukhethayo, ngakho-ke izindleko ziphansi ngokusobala kunalokho eminye imikhiqizo enikela ngama-smart blinds.
Sivivinye izimpumputhe ezihlakaniphile nezizenzakalelayo ze-KADRILJ ezivela ku-IKEA.
Njengephuzu elibi ngifuna ukugqamisa iqiniso lokuthi alikasebenzisani ne-Apple KomeKit, akunjalo ngeminye imikhiqizo ehlakaniphile ye-IKEA. Kodwa-ke, inkampani yaseSweden ithembise ukuvuselelwa ngokuzayo lapho sizokwazi ukuyisebenzisa ngeGoogle Home.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » I-KADRILJ sihlaziya i-IKEA smart blind
Amadili amahle kakhulu we-Black Friday 2019 ku-Amazon